Ndị Mmụọ Ozi Emee Ka A Mata na A Mụọla Jizọs | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Ndị Mmụọ Ozi Emee Ka A Mata na A Mụọla Jizọs
Mgbe Meri dị ime Jizọs, ya na Josef gara Betlehem, bụ́ obodo Josef. Ihe mere ha ji gaa bụ na Siza Ọgọstọs, onye na-achị Alaeze Rom, nyere iwu ka ndị Juu niile gaa n’obodo ha deba aha ha n’akwụkwọ. N’oge ahụ, Meri dị ime ọmụmụ.
Mgbe ha rutere Betlehem, ha gara nọrọ n’ụlọ anụ n’ihi na e nweghị ebe ọzọ ha hụrụ ha ga-anọ. Ọ bụ ebe ahụ ka Meri nọ mụọ Jizọs. Ọ fụrụ ya àkwà ma jiri nwayọọ nyiwe ya n’ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri.
E nwere ndị ọzụzụ atụrụ bi n’ọhịa n’ebe dị nso na Betlehem na-azụ atụrụ ha n’abalị. Na mberede, otu mmụọ ozi guzoro ha n’akụkụ, ebube Jehova nwuru ka ìhè gburugburu ha. Ụjọ bịara ndị ọzụzụ atụrụ ahụ, ma mmụọ ozi ahụ gwara ha, sị: ‘Unu atụla ụjọ. M chọrọ izi unu ozi na-enye obi ụtọ. Taa, ka a mụrụ Mezaya na Betlehem.’ Mgbe o kwuchara ihe a, ọtụtụ ndị mmụọ ozi pụtara, na-ekwu, sị: ‘Otuto dịrị Chineke n’eluigwe, ka udo dịkwa n’elu ụwa.’ Mgbe ndị mmụọ ozi ahụ kwuchara ihe a, ha pụrụ n’anya. Gịnịzi ka ndị ọzụzụ atụrụ ahụ mere?
Ha gwara ibe ha, sị: ‘Ka anyị gawanụ Betlehem ozugbo.’ Ha gawara ozugbo ma hụ Meri na Josef na nwa ọhụrụ ha n’ụlọ anụ.
Ihe ahụ mmụọ ozi ahụ gwara ndị ọzụzụ atụrụ ahụ tụrụ onye ọ bụla nụrụ ya n’anya. Meri chebaara ihe ahụ mmụọ ozi ahụ gwara ya echiche, o chefughịkwa ya. Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ mechara laghachi ebe ha na-azụ atụrụ ha. Mgbe ha na-ala, ha nọ na-ekele Jehova maka ihe niile o mere ka ha nụ ma hụ.
“Esi m n’ebe Chineke nọ bịa, m wee nọrọ n’ebe a. Abịaghịkwa m n’uche nke aka m ma ọlị, kama ọ bụ Onye ahụ zitere m.”—Jọn 8:42
Ajụjụ: Olee otú ndị mmụọ ozi si mee ka a mata na a mụọla Jizọs? Ònye na onye ka ndị ọzụzụ atụrụ ahụ hụrụ mgbe ha rutere na Betlehem?
Luk 2:1-20; Aịzaya 9:6
Meri Nọ Na-eche ‘Ihe Ihe Ndị ahụ Pụtara’
Ihe ndị mere mgbe Meri gara Betlehem mere ka okwukwe ya sie ike na Jehova ga-emezu nkwa ndị o kwere.
Olee otú Elizabet na nwa o bu n’afọ si kwanyere Jizọs ùgwù?
Olee otú anyị si mara na a mụghị Jizọs na Disemba 25?
‘N’ezie Chineke Mere Ya Onyenwe Anyị na Kraịst’
Anyị nwere ike inwewe obi abụọ nke ga-emebi okwukwe anyị. Fim a ga-eme ka i kwenyesie ike na Jizọs, bụ́ Mesaya ahụ na Eze nke Alaeze Chineke.